Shiinaha GD-EMB-012 bike Baaskiil buur koronto ah, 36v, batari lithium, mitir LED ah, koronto caawisay, 200 - 250w warshad iyo soosaarayaasha | GUODA
GD-EMB-012 bike Baaskiil buur koronto ah, 36v, baytariyada lithium, mitirka LED-ka, Awoodda la caawiyay, 200 - 250w
Faa'iidada badeecada: U adkaysiga daxalka iyo qayilo, shaqo wanaag iyo daahan fudud. Waxay leedahay iska caabin ah Abrasion wanaagsan iyo alxanka wanaagsan, oo waxaan ku siin karnaa adeegyo habaysan.
Isku laabmi karo:
Xawaaraha ugu badan:
<30km / saacaddii
baaskiil buuran e baaskiil
Biriigga Diski Haydarooliga
Daawaha Double Wall
daawaha, oo isku haysa, madow
Frame: 700Cx42C, xarkaha fiyuus kaarboon
Fargeeto: 700Cx42C, Fargeeto hakinta leh quful, safarka 100MM, taaj daawaha ah, lugaha bannaanka oo isugsan, fargeetada la duubay SUNTOUR SF16-NEX-DS-HLO
Noocyada madaxa: bir, set 9pcs, 28.6x42x52x39.8mm, nooca dunta madow, FSA NO.52
Handlebar: xarkaha gacan-hoose oo hooseeya, 31.8mmTP22.2x680mm, daawaha dunta leh ee jilicsan, ciid madow FSA
Biriigga Deji: Daawaha bareegyada qalabka 'Hydro disc', TEKTRO HD-M285
Set Crank: 38Tx170mm, steel kursi madow, daawaha crank madow
Silsilad: KMC Z99
Qalabka BB: BB oo lagu dhex daray BAFANG MID-MOTOR, 40T giraan silsilad madow
F / R Hub: Xarumo isku dhafan oo hore iyo gadaal ah, oo si deg deg ah lagu sii daayo madow
Qalabka Gear: SHIMANO DEORE 9 xawaare, SLM590RA-9 / RDM592SGS / KCSHG4009236
Cirifka: 700x38CX13GX32H ,, daawaha darbiga laba geesoodka ah, madow
Af-hayeennada: 13G, af-hayeennada birta ahama, oo leh ibta naxaasta ah, madow
Taayirrada: 700x42C Taayir madow oo leh khadad iftiimaya. Butyl tuubada gudaha A / V., Qaaradaha
Kursiga: daboolka sare ee vinyl, oo lagu laalay PU, madow, VELO
Kursiga Boostada: daawaha, oo haysa, madow
Baarayaasha: Aluminium buuxa, oo wata xambaarsan, 9/16 ″ oo leh kubbado iyo DIN milicsiga madow ee CNC, oo leh ciddiyo lidka ku ah
Decal: Warqad biyo ah
Qalabka: Alloy kickstand. Daawaha ayaa fashiliyey dhoobada. daawaha side gadaal madow. Daawaha dawanka yar. Iyada oo leh qufulka ABUS., Oo leh nal F / R oo ku shaqeeya baytariga baaskiilka
Mashiinka iyo Batariga: 36V / 250W BAFANG MID MOTOR; 36V / 10.4AH, SAMSUNG Lithium baytariyada, oo lagugu xiro furaha EU
Systerm: PAS, BAFANG xawaaraha dareeraha, guddiga BAFANG LCD oo leh 6 kaalmo oo heer sare ah, xawaaraha mashiinka lagu soo bandhigo koronto, odometer, xawaaraha sare iyo cilad ogaanshaha.
Xawaaraha ugu badan: 25km / saacaddii
Masaafada Masaafada: 50km (isku celcelis)
GuoDa Baaskiilada Korontada GuoDa # GD-EMB-012
SKD 85% isku imaatinka, hal meel oo kartoon badeed kasta ah
In la gorgortamo
Hore: GD-EMB-011 B Baaskiilada korantada ee korantada, 36v, 28 inji, batari lithium, 6061 aluminium iskujir ah, matoor 250w
Xiga: GD-EMB-013 b Baaskiil buur koronto leh, 26 inji, batari lithium oo loogu talagalay dadka waaweyn ee lagu caawiyo E-baaskiil, ebike madow
F / DIS Biriigu
3. Haddii uusan jirin baaskiil aad xiiseyneyso websaydhkayaga, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto si loo qoondeeyo shakhsi ahaaneed.
Iibso baaskiil aad u fiican si aad u bilowdo baaskiil wadista. Cilmi-baaris cilmiyeed ayaa muujisay in baaskiil wadiddu ay faa'iido u leedahay jirka aadanaha. Marka, iibsashada baaskiil sax ah dhab ahaantii macnaheedu waa xulashada qaab nololeed caafimaad leh. Intaa waxaa sii dheer, raacida baaskiilku kaliya kaa caawin maayo inaad ka baxsato saxmada taraafikada oo aad ku noolaato nolol kaarboon-yar oo kaarboon yar, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa nidaamka gaadiidka maxalliga ah oo saaxiibtinimo bay'adeena ah.
Qaabka mootada ayaa laga sameeyay Aluminium aluminium ah, oo baaskiil ka dhigaya mid fudud oo culeyskiisu yahay oo dabacsan dadka inay raacaan. Faa'iidada badeecada: U adkaysiga daxalka iyo qayilo, shaqo wanaag iyo daahan fudud. Waxay leedahay iska caabin ah Abrasion wanaagsan iyo alxanka wanaagsan, oo waxaan ku siin karnaa adeegyo habaysan.
Awoodda awood-u-joogsiga ah ee hore iyo gadaal gadaal-u-jebinta, iyo isku-habeynta, ayaa ku siinaya xakameyn aan horay loo arag baaskiilkaaga.
Kursiga barkinta ee raaxada leh ayaa kaa dhigaya inaad sii dheeraato fudayd. Kufiican raacitaan dheer & culus.
Si loo sii dheereeyo nolosha batariga, waxaan kuu soo jeedineynaa in la buuxiyo batteriga asbuucii xitaa adiga ma fuushan.
Baaskiilkan elektiroonigga ahi waa mid aan biyuhu xirin. Waad fuuli kartaa marka roobku da'o. Laakiin laguma raaci karo harada ama badda. Biyuhu waxay u baahan yihiin inay ka hooseeyaan giraangiraha buluugga ah si ay bateriga u difaacaan.
aluminium jir aluminium
Baaskiilka Wadanka 26 ″ Baaskiil koronto
awood la caawiyey
mishiinka gadaal loo rakibo
matoor xoog leh